Ihe kacha mma maka Tomtop maka Black Friday | Pricesrịba ahịa! | Akụkọ akụrụngwa
Ihe kacha mma Tomtop na-eme maka Black Friday
A na-eme ememme November 24 na-esote bụ Black Friday, ụbọchị nke ọtụtụ n'ime gị ga-eji ohere megharịa ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ zụta nke ị na-eso nwa oge. Mana ka Black Friday na-abịaru nso, ọtụtụ ibe weebụ na-enye onyinye dị mma iji gbalịa iji ike nke ụbọchị a.
Tomtop, otu n'ime weebụsaịtị kachasị na China, akwadebela anyị n'oge a, ụfọdụ onyinye na-atọ ụtọ nke anyị na-agaghị echefu, n'etiti nke anyị na-ahụ site na smartphones ka ngwa egwuregwu, ha niile nọ karịa ahịa ndị na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ohere ego ego anyị na-enye gị.
1 UleFone Ngwá Agha 2
3 Zhiyun Ezigbo-Q Gimbal
5 Tomtop ndị ọzọ na-enye ego ndị na-adọrọ mmasị
5.3 Ninggba akpụkpọ ụkwụ n'èzí n'èzí
5.4 Ikuku 2.4G Ikuku Mouse kiiboodu
5.5 Ikanam bọlbụ na ire ọkụ mmetụta
5.6 A-JAZZ GTX òké egwuregwu
5.7 Mousepad nwere AJAZZ RGB ìhè
5.8 AJAZZ AK33i igodo egwuregwu
UleFone Ngwá Agha 2
UleFone Armor 2 ama ama na-enye anyị ihe ngosi 5-inch tinyere 6 GB nke RAM, 64 GB nke nchekwa dị n'ime yana nke anyị nwere ohere iji nwee ọ enjoyụ egwuregwu kachasị amasị anyị na mgbakwunye na ịdekọ vidiyo ma ọ bụ eserese. n’enweghị nchegbu banyere nchekwa. Ọ na-eguzogide mmiri.
Zụta UleFone Armor 2. Koodu: AJAMOR
Hdị HOMTOP S8 na-enye anyị njedebe nke 5,7 sentimita asatọ na 18: 9 ihuenyo ruru, tinyere 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Ọ dakọtara na netwọk LTE. A na-akwụ ụgwọ HOMTOP S8 na euro 126,41.
Zụta HOMTOP S8. Koodu: AJHTS81
Zhiyun Ezigbo-Q Gimbal
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka vidiyo gị gosipụta ogo ọkachamara mgbe ị na-eme ihe ndekọ gị, gimbal bụ ngwaọrụ ịchọrọ, ebe ọ na-enye anyị nkwụsi ike dị mkpa iji mepụta vidiyo na-eji ire ụtọ. Ọnụ nke Gimbal Shiyun Smooth-Q3 bụ euro 109.64.
Zụta Gimbal Zhiyun Ezigbo-Q3.Code: AJZYGM
Ego ọzọ na-enye anyị ezigbo ego maka ego dị na LETV LeEco Le S3, ọnụ ọnụ dakọtara na netwọkụ 4G, a 5,5-inch ihuenyo tinyere 4 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Ahịa: 112,65 euro.
Zụta LETV LeEco Le S3. Koodu: AJLTS3
Tomtop ndị ọzọ na-enye ego ndị na-adọrọ mmasị
Homtop S7 bụ ọnụ ya na ihuenyo 5,5-inch na usoro 18: 9 nwere okpokolo osisi siri ike. Ọ dakọtara na netwọkụ 4G-LTE, ọ nwere ihe mmetụta mkpịsị aka, 3GB RAM na 32GB nke nchekwa dị n'ime.Akwụ ụgwọ: euro 92,87.
Zụta HOMTOP S7.
Onye nrụpụta FeiyuTech na-enyekwa anyị 3-axis stabilizer nke mere na vidiyo nke ama anyị na-apụta kpamkpam kpamkpam, ekwughi karịa. Ọnụ nke FeiyuTech SPG gimbal bụ euro 98,89.
Zụta Gimbal FeiyuTech SPG. Koodu: AJFG
Ninggba akpụkpọ ụkwụ n'èzí n'èzí
Mmadu adighi adi ndu site na ngwa elektrọnik na na HomTop anyi nwekwara ike ibi chọta akụrụngwa egwuregwu Dị ka akpụkpọ ụkwụ n'èzí na-agba ọsọ, akpụkpọ ụkwụ e mere maka ọfịs post, nke ejiri akwa na-eku ume nke na-anaghị amị amị. Ọnụahịa akpụkpọ ụkwụ ndị a bụ euro 25,79.
Zụta Tank N'èzí Na-agba ọsọ Akpụkpọ ụkwụ. Koodu: AJSPT
Ikuku 2.4G Ikuku Mouse kiiboodu
N'ihi Axis 2.4 G wireless kiiboodu na òké, ndị ọrụ nwere n'aka ha nwere ngwá ọrụ pụrụ iche nwere ike ịrụ ọrụ na PC, smart TV, Android TV Box, ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi, setịpụrụ igbe dị elu naanị na-ebugharị ya kpọmkwem na ikuku. Nke a kiiboodu na oke nwere ọnụahịa 17,19 euro.
Zụta kiiboodu na oke Axis 2.4 G. Koodu: AJ11S5
Ikanam bọlbụ na ire ọkụ mmetụta
Ọ bụrụ na ị chetụla n’echiche inwe bọlb ọkụ nke na-eme ka ọkụ kandụl ma ọ bụ ire ọkụ na-enwu, TomTop na-enye anyị Ikanam bọlbụ na ire ọkụ mmetụta ọnụ ahịa euro 7,30.
Zụrụ bọlbụ bọlbụ na ọkụ ọkụ. Koodu: AJLED
A-JAZZ GTX òké egwuregwu
Productsgba Cha Cha ngwaahịa bụ karịsịa oké ọnụ ruru ka mmepe na nyocha n’azụ ha. Mana ụbọchị ole na ole ị nwere ike iji uru a wee nweta gamin A-JAZZ GTX òké naanị euro 15,47.
Zụrụ oke-egwu egwuregwu A-JAZZ GTX.
Mousepad nwere AJAZZ RGB ìhè
Ngwaọrụ egwuregwu ọzọ dị na TomTop ụbọchị a bụ akwa AJAZZ RGB, akwa ute nwere ihu igwe dịtụ ntakịrị ana achi achi nkenke na osooso anyị kwesịrị na anyị mmasị egwuregwu. Na mgbakwunye, anyị nwere ike hazie ya ka ọ gbanwee agba dị ka mkpa anyị si dị.
Zụrụ AJAZZ RGB ute na ọkụ.
AJAZZ AK33i igodo egwuregwu
Anyị enweghị ike ịmechaa ndepụta nke ngwaahịa ngwaahịa ịgba egwu nke Tomtop na-enye anyị na-enweghị ikwu maka keyboard keyboard AJAZZ AK33i, kiiboodu na tbacklit na okirikiri n'ibu eclas nwere vinteji anya. Ọnụahịa nke keyboard AJAZZ AK33i bụ euro 36,99.
Zụrụ keyboard ịgba egwu AJAZZ AK33i
Anyị nwere olile anya na ị ga-enwe mmasị na onyinye ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihe kacha mma Tomtop na-eme maka Black Friday
PlayStation Plus ga-enwere onwe ya ụbọchị ise na Europe
EA Backtracks Game Iwu maka Star Wars: Battlefront II